Cibaado iyo caqiido maxay yihiin? – Kaasho Maanka
Cibaadadu waa maamul iyo siyaasad la sameeyey xilliyo hore oo ay dadku aad uga garasho iyo aqoon yaraayeen heerka ay maanta joogaan. Dadkii cibaadada soo rogey ujeeddadooda ugu weyni waxa ay ahayd in dadka shaqo la’aanta ah loo sameeyo waxyaalo ay ku mashquulaan, dadkuna xilliyadii hore bilaa camal buu u badnaan jirey. Maanta sida badan cibaado loo ma baahna oo dadku shaqooyin ama waxbarashooyin bay ku mashquulsan yihiin, xilliyada ay firaaqada yihiinna waxa ay daawan karaan filimo iyo ciyaaro ama buugaag bay akhrisan karaan. Waddamada ay shaqo la’aanta ba’ani ka jirto, isla markaas aysan dadku filimo iyo buugaag fahmi karin sida Soomaaliya waxaa laga yaabaa marmar in cibaado looga baahan yahay si muranka dadka loo yareeyo oo loo ka la jiheeyo.
Caqiidadu waa siyaasad ay shakhsiyaad ku raadinayeen in ay dadku taageeraan. Dadku waxa ay u ka la baxaan qaar dadka kale lagu salliday oo jecel in ay sida dadku u fakarayaan xukumaan oo in iyaga lagu xirmo jecel iyo qaar aan dadka kale dareenkooda dan ka lahayn oo iskood isaga nool. Dadkii caqiidada soo rogey waxa ay ahaayeen dad jeclaa in iyaga la taageero oo niyadda lagu hayo, waxa ayna sida badan caqiidada ku saleeyeen in ay dadka bajiyaan ama hunguri geliyaan si iyaga loo raaco. Taageerada dadkaas loo hayo oo ah caqiidada ayey cibaadada lafteedu ku xiran tahay oo waa siyaasad loo degey xilli ay dadku aad u wacyi hooseeyeen.
Meelaha cibaadada oo la isugu yimaado waxaa fiican in aan la dumin si dadku markii ay ilbaxaan ay qarniyada danbe u arkaan waxyaalihii ay dadkii ka horreeyey samayn jireen iyo meelihii ay ku samayn jireen. Xilliga aynu joognaa weli waa casri jaahili oo dadku ma wada ilbixin, waxaana taas caddaynaya in ay weli cibaado iyo caqiido jiraan. Cibaadada iyo caqiidadu waxa ay curyaamiyaan shaqada iyo waxbarashada oo waddankii ay ku badan yihiin laga ma yaabo in uu horemaro, waayo shaqada iyo waxbarashada ayaa lafdhabar u ah horemarka oo dhan.
QORMO LA XIRIIRTA: Ooyaaye!
Khamriga haddii aad cabto oo aanad ku sakhraamin waa xalaal dhibna ma leh. Waxa xarrimaya cabidda maaha ee waa sakhrada keenaysa wareerka maskaxda, hadalkan nuxurkiisu wuxuu noqonaya khamri waad cabbi kartaa haddii aanu doorinayn maankaaga, sidoo kale wax kasta oo lagu sakhraamo waa xaaran (ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺣﺮﺍﻡ) wax kasta oo aan lagu sakhraaminina wuxuu noqonaya xalaal.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 5th February 2019